Kulansannadeedkii xisbiyada Miljö partiet xisbiga doogga iyo Sverige Demokraterna xisbiga dimoqoraadiga Iswiidhen. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulansannadeedkii xisbiyada Miljö partiet xisbiga doogga iyo Sverige Demokraterna xisbiga dimoqoraadiga Iswiidhen.
La daabacay onsdag 23 maj 2007 kl 15.27
Dhammaadkii toddobaadkii eynu ka soo gudubney waxaa dalkan Iswiidhen ka dhacey kullan sannadeed laba ka mid ah xisbiyada ugu xubnaha yar ee dalka – xisbiga doogga Miljö Partiet iyo xisbiga demoqaraadiga ee Sweedhen Sveriges Demokraterna, ahana xisbi ku dhisan faqooqa ajnabiga.
Arrimmaha cimilada oo maalmahan oo dhan afka lagu hayey, iyo doorashadii sannadkii hore oo ey kuraas badan ku helaan xunha degmooyinka ayaa ka dhigaya labada xisbi kuwo ey neecawda dabeyshu dhankooda u dhaceyso.
Barnaamijka qeybtiisanna waxaan kaga hadli doonnaa kullansannadeedyadii xisbiyadaa. Aan ku hor maro xisbiga SD.
Muddo ayaan la garaneyn in xisbiga Dimoqoraadiga Sweedhen ey suurtagal u noqon doonto inuu helo goob uu ku qabsado kulan sannadeedkiisa, iyadoona mararka qaarkood carrabka lagu dhufanayey iney suurtagal noqoto dalka dibaddiisa gaar ahaan Denmarka in lagu qabto.
Arrinkaasina oo ka dambeeyey iyada oo laba goobood ey diideen, in kullanka xisbigaasi lagu qabto sababna ey uga dhigeen ammaanka dartii.
Hase yeeshee waxaa ugu dambeyntii xisbiga SD oo ka taagan xisbiga dimoqoraadiga ee Iswiidhen u suurtagashey, iney kulankooda ku qabsadaan magaalada Karlskrona oo ey doorashaddii ugu dambeysey noqdeen xisbiga saddexaad ee ugu tirada badan, heleyna 10%.
Marka laga yimaado bannaanbaxyo la dhigayey muddadii uu kulanku socdey iyo dhowr qof oo goobtaasi ey boliisku gacanta ku dhigeen, ayaa kulanku si nabad leh ku dhacey.
Iyadoona muddadii uu kulanku socdey harreeyey doodo un la xiriira soo galootiga, adkeenta shuruudaha qaadashada sharciga dhalasho ee dalka, sidoo kale adkeynta siinta deggenaansho ee qaraabada. Sidoo kale in la xoojiyo habfikir nololeedka dadyoowga asal ahaan ka soo jeeda iswiidhishka.
Qaar badan ee ka mid ah go’aamadii kulankaasi lagu gaareyna ey ahaayeen kuwo laga soo min guuriyey xisbiga dhiggiisa ee dalka Denmark, laguna magacaabo Folkpartiet.
Iyo guulaha uu xisbigaasi ka soo hoyey dalkaasi isaga oo adeegsanaya waxyaalo liddi ku ah qaxootiga.
Björn Söder, xoogheynta guud ee xisbiga SD.
- Gobolka Skåne, wuxuu ku sugan yahey xaalad ey ku sugnaan jireen bulshadii dawladdii la oran jirey Jarmalka Bari.
Sidii ey u eegi jireen derbiga kala faqooqey waagaasi ee walaalahooda Jarmalka galbeed ee magaalada Baarliin, ayaan u eegnaa buundada na kala faqooqda Danmark ee Öresund, waxaana noo muuqad xorriyad, furfurnaan iyo horumar dhaqaale.
Sidoo kale waxaa kalfadhigaa lagu ansixiyey barnaamij ku wajahan waayeelka iyo goobaha lagu xannaaneeyo. Halkaasina oo loo ballan qaadey ”Cunno ka wanaagsan midda ey iminka helaan”.
Sidoo kale fikirradii laga doodey ayey ka mid ahaayeen in la mamnuuco dhismaha masaajiddada, iyadoona lagu saleeyey in dhowro taariikhda iyo dhaqanka dadyoowga iswiidhishka asal ahaan ka soo jeeda.
Kulankii ey degmada Karlskrona ku yeeshee xisbiga dhanka jirka ah ee SD, ayaa dib loogu doortey hogaamiyihii xisbiga, horeyna u hayey jagada, Jimmie Åkesson.
- Goolkayagu maaha oo keliya inaan xubno ku yeelano baarlamanka, doorashada dhici doonta sannadka 2010-ka.
Goolkayagu wuxuu yahey in aan noqono xisbiga saddexaad ama afaraad, si aan awood ugu yeelano in aan saameyno nolosha bulshada, iyo siyaasadda saameysa dalka. Waa goolka aan leeyahey.
Sida uu sheegey Jimmie Åkesson, ahna hogaamiyaha xisbiga xag jirka ee Sverige Demokraterna.
Cawad Xirisi wuxuu ka tirsan yahey, kana yahey xubin firfircoon, xisbiga cagaaran ama doogga ee Miljö Partiet.
Dhowaantan oo uu xisbigaasi yeeshey kulan socdey afar maalmood ayuu cawad wuxuu ka mid ahaa ergooyinkii uga qeyb galey degmada Istockholm xubnihii ey goobtaasi u dirsatey.
Cawad ayaa inoo faahfaahiyey kulankani waxa uu yahey.
Kulankaasi socdey afarta maalmood sida Cawad sheegey, ayaa su’aalihii ugu waaweynaa ee looga hadley waxaa ka mid ahaa dhanka cimilada iyo warbixintii dhowrka toddobaad ka hor ey soo saartey heyadda qaramada midoowdey, laguna caddeeyey iney jiraan dhibaatooyin ba’an ee cimilada soo gaarta, lana xiriirta sunta koldioxid-ka.
Halkaasina lagu gaarey go’aan aqlabiyad ah in la dhimo haraaga suntaa 80% inta ka horreysa sannadka 2050-ka.
Middaasina oo aad uga badan tii caalamku gaarey kuna wajahneyd in suntaasi la dhimo 5.2% inta ka horreysa sannadka 2012-ka.
- Tallaabadani waa lagama maarmaan sida ey sheegeen culimadu, waana mid heshiis guud ey ka gaaren caalamku. Haddii la yiraahdo waa wax middaasi xaqiiqda ka baxsan, markaa garan maayo tallaabada loo baahan yahey in siyaasiyuuntu ku tallaabsadaan si wax looga qabto. Sida uu sheegey Peter Ericsson, kana mid aha labada hogaamiye ee xisbiga horey u hayey hoggaankiisa islamarkaana loogu doortey jagadaasi iney sannad hor leh sii hayaan.
Mar kale iyo Cawad Xirsi.
Arrimmaha cimiladu waxey ahaayeen kuwa ugu ballaarnaa ee dooduhu badankood ku saabsanaayeen, sida uu noo sheegey Cawad Xirsi oo ka mid ahaa ergooyinkii xisbiga doogga ee ka qeyb qaatey kalfadhigii sannadeedka ee xisbigaasi.
Amuuraha la xiriira cimilada ayaa dhowaanahan ahaa kuwo aad loo af hayey, islamarkaan ey u ololeynayeen xisbiyada dalka dhammaantood, amuurtaasina ey dhalisey su’aasha ah, miyaaney taasi keeni karreyn in fikirkii uu xisbigaasiba ku aasaasmey ey ka xyuubsadaan xisbiga cagaaran. Mise waa mid kor u qaadeysa tayada xisbiga?. Iyadoona uu dhowaantan safar uu madaxa dawladda ee dalkan Iswiidhen Fredrik Reinfield ku tagey dalka Mareeykanka, aad loogu ammaaney tallaabooyinka wanaagsan ee uu dalkani ka qaadey badbaadinta dhanka cimilada.
Agneta Börjesson, oo kulankaasi loogu doortey xoogheynta xisbiga cagaaran oo middaa ka jawaabta waxey tiri:
- Waa arrin albaabada noo furaya, si aan tallaabooyin intaa dheer ugu sii tallaabsan laheyn. Tirakoobyo la sameeyey maalmihii ugu dambeeyey waxey xaqiijinayaan in aaney af ku heynta arrimmaha cimiladu wax dhibaato ah u geysaneyn tirada dadyoowga taageersan xisbigayaga.
Cawad mar kale.